सबैले थाहा पाउनुपर्ने कोरोना भाइरसका सम्बन्धका केही महत्वपूर्ण तथ्यहरु — Sanchar Kendra
सबैले थाहा पाउनुपर्ने कोरोना भाइरसका सम्बन्धका केही महत्वपूर्ण तथ्यहरु
अल्ट्रा भ्वाइलेट डिस-इन्फेक्सन ल्याम्प (पराबैजनी कीटाणुनाशक ल्याम्प)ले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा हात अथवा शरीरका कुनै पनि अन्य अंगहरुलाई किटाणुरहित राख्नका लागि हल्ट्रा भ्वाइलेट डिस-इन्फेक्सन ल्याम्पको प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन सक्छ । यो छालाका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको पहिचानका लागि थर्मल स्क्यानर कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा थर्मल स्क्यानर पूर्ण रुपमा प्रभावकारी हँुदैन । थर्मल स्क्यानरले त्यो बेलामा मात्र कोरोना भाइरसको पहिचान गर्न सक्छ, जब कुनै व्यक्तिलाई इन्फेक्सनका कारण ज्वरो आएको हुन्छ अथवा उसको तापक्रम सामान्य भन्दा बढि भएको हुन्छ । थर्मल स्क्यानर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ती व्यक्तिहरुको पहिचान गर्न सक्दैन, जसलाई ज्वरो आएको हुँदैन । त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण भनेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि स्वास्थ्य बिग्रन र ज्वरो आउन दुईदेखि १० दिनको समय लाग्छ ।